08/19/13 ~ Myanmar Forward
ဒါရိုက်တာ ညွန့်မြန်မာ ညီညီအောင် အနုပညာ လုပ်ခွင့် ၃ လ ပိတ်ပင်ခံရ
Posted by drmyochit Monday, August 19, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ရိုက်ကွင်းတခုပေါ်တွင် ညွှန်ကြားနေသော ဒါရိုက်တာ ညွန့်မြန်မာညီညီအောင် (ဓာတ်ပုံ – ရွှေစင်ဦး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး facebook မှ)
တကယ်တော့ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး အသစ် ဖွဲ့ပြီးတာ ၂ နှစ်မပြည့်သေးပါဘူး၊ တိတိကျကျ ပြောရရင်တော့ တနှစ်နဲ့ လေးလပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်အစိုးရလက်အောက်ကလို အကျင့်ဟောင်းတွေ ပြန်ပေါ်လာပြီလားလို့ တွေးဖို့ကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကတော့ ပူပူနွေးနွေး ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။
စစ်အစိုးရ လက်ထက်တုန်းကတော့ သန်းဖေလေး၊ ဇာဂနာ၊ မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်)၊ အရိုင်း၊ ကျော်ရဲအောင်၊ မိုက်တီး တို့ကို ပိတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုတော့ ထူးထူးခြားခြား အစိုးရနဲ့ ကင်ကင်းရှင်းရှင်းပါ၊ NGO စစ်စစ်ပါ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး ကြီးက အရင်က စစ်အစိုးရလက်ထက်က စိတ် ပြန်ပေါက်သွားပြီးလားလို့ မေးရမလိုဖြစ်နေပါပြီ။
ပိုဆိုးတာက ဒီလို ညွန့်မြန်မာ ညီညီအောင်ကို ပိတ်ပစ်ဖို့ တိုင်တာ ဇာဂနာဆိုတဲ့ သတင်း ထွက်ပေါ်နေတာပါပဲ။ ကွယ်လွန်သူ စာရေးဆရာ မင်းလူ စကား ငှားသုံးရရင် “ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲ” ပေါ့။ ဒါပေမယ့် မစပ်စု သဘာဝအတိုင်း မေးမြန်းကြည့်ရ ပါဦးမယ်။
“ကျနော့်ဆီ မနေ့က စာရောက်လာတယ်။ ကိုညီအောင်ကို ၃ လ ပိတ်တဲ့စာ။ ကျနော် တော်တော် အံ့အားသင့်တယ်။ ကျနော်က န၀တ လက်ထက်မှာ ၃ နှစ် တခါ၊ ၅ နှစ်တခါ၊ ရာသက်ပန် တခါ အနုပညာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပိတ်ပင် ခံခဲ့ရတဲ့ ကောင်ပါဗျာ။ ကျနော့်လိုမျိုး ဘယ်သူ့ကိုမှ အပိတ် မခံစေချင်ပါဘူး” လို့ သူ့ ခံစားချက်ကို ပြောပြပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလူမင်းရော၊ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးကြူလေးကိုပါ ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ် မေးမြန်း ခဲ့ပေမယ့် အစည်းအရုံးသာ လာခဲ့ဖို့ပြောနေတော့ မစပ်စုကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ကနေ လှမ်းပြီး ဆက်သွယ် ရတဲ့သူ ဖြစ်နေတာကြောင့် မေးမြန်းလို့ ရသမျှနဲ့ပဲ တင်းတိမ်ကျေနပ် လိုက်ရပါတယ်။
“ကျနော် ဖုန်းဆက် ကြည့်ပါတယ်။ ကိုလူမင်းက နေပြည်တော် ရောက်နေလို့ သူမသိဘူးတဲ့၊ အခုမှ ရုံးကို သွားနေတာတဲ့၊ မေးပြီး အကြောင်းပြန် ပါ့မယ်တဲ့။ ဦးအေးကြူလေး ကတော့ ဒါရိုက်တာ ကိုယ်တိုင်က လာပိတ်ခိုင်းတာပါ၊ မာန်ထက်ချီ ထုတ်လုပ်ရေး ပိုင်ရှင် ဦးဝင်းကို (သရုပ်ဆောင် ဟိန်းဝေယံရဲ့ အဖေ) က ကြည်ဖြူသျှင်ရဲ့ ကားထက် စောပြီး ထွက်ချင်တယ် လို့ တင်ပြလာတယ် တဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ ညွန့်မြန်မာ ညီညီအောင်ရဲ့ ကားကို စောထွက်လို့မရအောင် ဒါရိုက်တာကို အနုပညာ လုပ်ကိုင်ခွင့် သုံးလ ပိတ်လိုက်ရတာတဲ့ဗျာ။ကျနော့် အဖြစ်ကတော့ ပဲလှော်ကြား ဆားညပ် တာပေ့ါဗျာ” လို့ ဇာဂနာက မစပ်စု ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Posted by drmyochit Monday, August 19, 2013, under မှုခင်း | No comments
မုံရွာမြို့၊ ဇလုပ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကံပြားလေးရွာ သုဿန်ဟောင်း၏ မြောက်ဘက်အနီးရှိ ရေကန်ဟောင်းကြီး (ရေမရှိ) အတွင်း၌ ယခုလ ၁၉ ရက်နေ့ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီအချိန်ခန့်က လူသတ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံပြည်သူများ၏ ဆက်သွယ်ပြောကြားချက်များအရ သိရသည်။
အဆိုပါ သတင်း အချက်အလက်များအား အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ရဲဌာနသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း ခဲ့ရာ “ အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာကို ဓားကိုင်ပြီးဖြေရှင်ခဲ့ရာက အခုလို လူသတ်မှုဖြစ်ပွား ခဲ့ရတာပါ..” ဟု ရဲအရာရှိတစ်ဦးမှ တုန့်ပြန် ပြောကြားသည်။
မုံရွာ၊ သြဂုတ် ၁၉ ရက်နေ့ ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်
Posted by drmyochit Monday, August 19, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
အသက် (၁၈) ပြည့်မှ ဖတ်ပါ။ အိပ်ခန်းထဲမှ အချစ်ဟာ သင့်အတွက် ကင်ဆာရောဂါကို အောင်နိုင်ပြီး နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အပြင် အရွယ်တင် နုပျိုစေပါတယ်။ လိင် ဆက်ဆံမှု ပြုလုပ်တာကြောင့် ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ပိုကောင်းမွန်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဆိုတာ ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
ရွှေတိဂုံဘုရားက ပျောက်သွားသည့် ရွှေခွက် အဘိုးအိုထံတွင် ပြန်တွေ့
ရွှေခွက်ပိုင်ရှင်သည် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် ဒေါ်သင်းသင်းဖြစ်ပြီး သူမသည် ရွှေခွက်ဖြင့် ရေချမ်းကပ်ပြီး ဘုရားဝတ်ပြုနေစဉ် ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ရဲက မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
ဒေါ်သင်းသင်းက ဘုရား ၀တ်ပြုပြီးနောက် ရွှေခွက်ကို မတွေ့တော့သောအခါ ဘုရားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကို အကြောင်းကြားပြီး လိုက်လံ ရှာဖွေခဲ့ကြသည်ဟုလည်း မှုခင်းမှတ်တမ်းတွင် တွေ့ရသည်။
၎င်းအဖိုးအိုကို ဘုရားလုံခြုံရေး ရုံးခန်းသို့ ခေါ်ဆောင်မေးမြန်းရာ သူ့ကို တန်ခိုးရှင် ဘိုးတော်တစ်ဦးက မ,စပြီး ပေးသည်ထင်သဖြင့် ယူဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောဆို၍ ရွှေခွက်ကို မူလပိုင်ရှင်ထံသို့ ပြန်ပေးခဲ့သည်။
၁၇.၈.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၂၂၀၀ အချိန် လှိုင်မြို့နယ်နေ ဦး----- သည် သီရိမင်္ဂလာဈေးသစ်အနီးရှိ နန်းထိုက်တော်ဝင်ဘီယာဆိုင်၌ ဘီယာသောက်ပြီးဆိုင်မှပြန်ထွက်စဉ် မလှမ်းမကမ်းတွင် တွေ့ရသည့်
ပြည့်တန်ဆာမိန်းကလေးတစ်ဦးအားပျော်ပါးရန် ခေါ်ယူခဲ့ရာ ၎င်းမိန်းကလေးနှင့်အတူ အမည်မသိ အသက်(၂၀)ကျော်ခန့်ရှိ အမျိုးသား(၂)ဦးလည်းအတူလိုက်ပါခဲ့ကာ အငှားယာဉ်ဖြင့် တည်းခိုခန်း
ထိုသို့တည်းခိုခန်းအား လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရာမှ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံသို့အရောက် ဦး---နှင့် မိန်းကလေးသည် ယာဉ်ပေါ်မှဆင်းကာ လမ်းဘေး၌ အပေါ့သွားနေစဉ် အတူလိုက်ပါလာသည့် အမျိုးသား(၂)ဦးမှ ဦး---- အား ဆောင့်တွန်း၍ လွယ်ထားသည့်အနက်ရောက်ဘေးလွယ်
အိတ်အတွင်း၌ ငွေကျပ်(၂)သိန်းကျော်ခန့်၊ လက်ကိုင်ဖုန်း(၁)လုံး၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်(၁)ခု၊ ဘဏ်ငွေ ထုတ်ကဒ်(၁)ခုတို့ ပါဆုံးသွားခဲ့ပြီးေ ဆာင့်တွန်းခံရ၍ ဦး--- တွင် ၀ဲနားထင်၊ဒူးနှစ်ဖက် တို့တွင်ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာ
များရရှိခဲ့သဖြင့် ၁၈.၈.၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် သောင်ကြီးနယ်မြေရဲစခန်းသို့ လာရောက်တိုင်တန်း ခဲ့သဖြင့် (ပ)၄၈၁/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၈၂/၁၁၄ ဖြင့် အရေးယူ စုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အမှုမှတရားခံများ ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် သောင်ကြီးနယ်မြေရဲစခန်းမှူးနှင့်နယ်ထိန်း တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ စုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ (၂၀)ရပ်ကွက်နေသူများဖြစ်သည့် ကျော်နိုင်(ခ)ကုလားလေး၊
ကျော်မင်းသန့်(ခ)ရဲမင်းသူ နှင့် မသင်းသင်းအေး(ခ)တောသူမတို့ (၃)ဦး မှပူးပေါင်း ကျူးလွန် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး သက်သေခံပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
iPhone5ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် တရုတ် အမျိုးသမီး တစ်ဦး မျက်လုံး ထိမှန်
Posted by drmyochit Monday, August 19, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ပေကျင်း သြဂုတ် ၁၃
တရုတ်နိုင်ငံမှ အမျိုးသမီး တစ်ဦးသည iPhone5ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မျက်လုံးထိမှန် ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ လီအမည်ရှိ အဆိုပါ အမျိုးသမီးသည် ၎င်းဖုန်းဖြင့် မိနစ် ၄ဝကြာ စကားပြောပြီး ဖုန်းကို ပိတ်ရန် ကြိုးစားရာ ဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာ တုံ့ပြန်မှု မရှိတော့ဘဲ ဖုန်း၏ ညာဘက် အပေါ်ထောင့် နေ
ရာမှ ပေါက်ကွဲမှု တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ၄င်း၏ အစအနများသည် သူမ၏ မျက်လုံးအတွင်း သို့ဝင်ရောက် ခဲ့ကြောင်း လီကပြောကြားခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လအတွင်း ကလည်း အသက် ၂၃နှစ်အရွယ်ရှိ လေယာဉ်မယ် တစ်ဦးသည် iPhone 5ကို အားသွင်းထားစဉ် ဖုန်းဝင် လာသောကြောင့် အားသွင်းလျက် နှင့်ပင် ဖုန်းပြန်ဖြေ လိုက်ရာ ဓာတ်လိုက် သေဆုံးသွားကြောင်း ၄င်းက ထပ်လောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားခဲ့မှု နှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ iPhone အသုံးပြုသူများ အကြား တွင် ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး အဆိုပါ ဖုန်းကို လူသတ်ဖုန်း ဟုပင် ခေါ်ဆို နေကြကြောင်း သိရသည်။
ကိုယ်လုံးချွတ်ရိုက်တာမဟုတ်ပေမယ့် ဝေဖန်မှုကြောင့် Sexy ကာရိုက်တာတွေ လုံးဝမရိုက်တော့တဲ့ ဘေဘီမောင်
Posted by drmyochit Monday, August 19, 2013, under အနုပညာ |2comments
ပရိသတ်တွေကို Sexy ဆန်ဆန် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံရိပ်တွေနဲ့ ဖမ်းစားခဲ့တဲ့ ဘေဘီမောင်က အခုဆိုရင် ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှုတွေလည်း ပိုများလာခဲ့ပါပြီ။ သရုပ်ဆောင်လောကမှာ အနေအထားတစ်ရပ်အထိ ရရှိလာတဲ့အတွက် ဘေဘီမောင်အနေနဲ့ ဘယ်လိုဇာတ်ရုပ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် သရုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမပါဝင်မယ့် ဇာတ်ကားမှာ ခြွင်းချက်အနေနဲ့ သူငယ်ချင်းအခန်းက ဘယ်တော့မှ မရိုက်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ဓါတ်ပုံရိုက်ရင် ခပ်လန်းလန်းပုံတွေကိုသာ ရိုက်တက်တဲ့ ဘေဘီမောင်က နောက်ထပ် အဲဒီလို Sexy Pose တွေ မရိုက်တော့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ အဲဒီတုန်းက myanmarcelebrity.com က ရိုက်ပေးဖို့ပြောလို့ ရိုက်ဖြစ်တာပါ။ နိုင်ငံခြားမှာလည်း ရိုက်ကြတာပဲ။ ညီမရိုက်တာ အရမ်းဆိုးဆိုးကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကိုယ်လုံးချွတ်ထားတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ညီမမှာရှိတဲ့ အလှလေးတွေကိုပဲ ပေါ်လွင်အောင် ရိုက်ပေးထားတာကို ဝေဖန်တာတွေ အရမ်းများတဲ့အခါကျတော့ တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ဓါတ်ပုံတောင် ဒီလောက် အပြောခံရတော့ ဇာတ်ကားရိုက်လို့များ အရမ်းကြမ်းတဲ့ Sexy ကာရိုက်တာတွေ ရိုက်မယ်ဆိုရင် ဘေဘီမောင် ကိုဘယ်လိုများပြောကြမလဲမသိဘူး။ ဒါကြောင့် အခုဆိုရင် အဲဒီလို ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်တာရော၊ Sexy ကာရိုက်တာတွေရော လုံးဝမရိုက်တော့ဘူး။ ရှောင်တယ်” လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
( နိရဉ္စရာ- သြဂတ် ၁၈) / မောင်နီမိုး
နယ်ခြားစောင့် တပ်စွဲရာ ၀ဲကြီးစခန်းသို့ ကေအင်န်ယူ အလစ်ဝင်တိုက်
ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန်ခရိုင်အတွင်း နယ်ခြားစောင့် ခတစ (၁၀၁၄) တပ်ရင်း တပ်စွဲရာ ၀ဲကြီးစခန်းကို ကေအင်န်ယူတပ်မဟာ(၅)မှ သြဂုတ်၁၇ရက် နံနက်ပိုင်းက အင်းအား၂၀ဖြင့် အလစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု နယ်ခြားစောင့်တပ်(BDF)မှ တာဝန်ရှိသူတို့က ဆိုသည်။
ခတစ (၁၀၁၄) စောအေဘီလွင်ဦးဆောင်သည့် တပ်ရင်းတပ်စွဲရာ ၀ဲကြီးစခန်းသို့ ကေအင်န်ယူတပ်မဟာ(၅)မှ ဗိုလ်မှူး စောဖာနု ဦးစီးသည့် တပ်ရင်း(၁၀၂)က အင်အား၂၀ခန့်ဖြင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်မှ နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကျင်းပရန် သုံးရက်အလို နံနက်ပိုင်းက ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“တိုက်ပွဲကြောင့် BDF က တစ်ဦးသေတယ်၊ နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကေအင်န်ယူက တာဝန်ရှိသူတွေက အမိန့်မနာခံတဲ့ တပ်သားတွေကြောင့် ဖြစ်ရတာ၊ သူတို့ကိုစမ်းဖော်ထုတ်ပြီး ထိရောက်စွာအရေးယူ ပေးပါမယ်လို့ ပြောထား တယ်”ဟု BDF တပ်မှ ဗိုလ်မှူးနိုင်မောင်ဇော်က ပြောသည်။
သြဂုတ်လ၂၀ရက်၌ ကျင်းပမည့် နယ်ခြားစောင့်တပ်၏ သုံးနှစ်ပြည့်အခမ်းအနားသို့ ကေအင်န်ယူတပ်ဖွဲ့ကိုလည်း ဖိတ်ကြားထားကြောင်း၊ မိမိတို့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကြား ပြဿနာကြီးကြီးမားမားမရှိကြောင်း၊ ယခုကိစ္စမှာ အမိန့်မနာခံသည့် တပ်သား များကြောင့် နှစ်ဖွဲ့အကြားထားရှိသည့် ငြိမ်းချမ်းမှုအား မပျက်စီးလိုကြောင်း ကေအန်ယူဘက်မှ ပြောဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြား သည်။
၂၀၁၀ပြည့်နှစ် သြဂုတ်၂၀ရက်၌ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် နယ်ခြားစောင့်တပ်(BDF)မှာ လာမည့် သြဂုတ်၂၀ရက်၌ သုံးနှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနား ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်နေချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့
နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များအကြား အထင်အမြင်လွဲမှားစေနိုင်သော ပြောကြားချက်များ သတိပြုသင့် ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ပြောကြား
သြဂုတ်လ၅ရက်နေ့ထုတ်Messengerသတင်းစာ၊စာမျက်နှာ(၉)တွင်“နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် ကာချုပ် အမည်ကို သုံး၍ ရွှေနံ့သာရပ်ကွက်၌ လယ်မြေသိမ်းဆည်းမှုများ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိ”
သတင်းခေါင်း စဉ်ဖြင့်ဖော်ပြ ပါရှိခဲ့သော သတင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးအားဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိန်ဝင်း၏
ပြောကြားချက်မှာ မှားယွင်းနေကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီများက နေပြည်တော်ခရိုင်၊ရွှေနံ့သာရပ်ကွက်
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့၏ အမည်ကိုသုံး၍ဆောင်ရွက် နေသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်မှာ
နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် တို့အပေါ် အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများ
ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်ကို The Messengerဂျာနယ်No.13
စွန့်စားလိုစိတ်ရှိသော အမျိုးသမီး များသည် လိင်မှု ကိစ္စတွင် ပိုမိုပြင်းပြစွာ ဆောင်ရွက် လိုစိတ် ရှိကြောင်း သိရှိ ရသည်။
ရှီကားဂိုး တက္ကသိုလ်မှ ပညာရှင် များသည် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ အယောက် (၅၀၀) ၏ တံတွေးမှ တဆင့် လိင်မှု အာရုံကို လှုံ့ဆော်ပေးသော Testosterone ပမာဏကို တိုင်းတာ မှတ်သားခဲ့ရာ လိင်ဆိုင်ရာ ဆန္ဒပြင်းပြ သည့် အမျိုးသမီး များသည် အများအားဖြင့် လောင်းကစား ဆန်ဆန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင် တတ်သူများ ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိ ခဲ့ရသည်။
ထီထိုးခြင်း ကဲ့သို့ ကံစမ်းမှုမျိုး နှင့် သေမြေကြီး၊ ရှင်ရွှေထီး စွန့်စားရသော အလုပ်အကိုင် များကို ခုံမင်လေ့ ရှိသည့် အမျိုးသမီးများ၏ Testosterone မှာ အမြင့်ဆုံး အနေအထား ရောက်ရှိ နေတတ်သလို ထို အမျိုးသမီးများသည် လိင်မှု ကိစ္စတွင်လည်း အရဲကိုး ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်လေ့ ရှိကြောင်း ပညာရှင်များက ဆိုသည်။
ဒေါ်စုကို နိုင်ငံခြားဘယ်သူပို့ လိုက်တာလဲ? ဘာကြောင့်နိုင်ငံခြားသားနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ရသလဲ?
Posted by drmyochit Monday, August 19, 2013, under တစ်ဆင့်ပြန်လည်ဖော်ပြ |2comments
ဒေါ်စုကို ဒီနိုင်ငံမှာ မနေနိုင်အောင် လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးလေဖမ်းဒန်းစီးနေကြသူတွေကို ပြောပါရစေ။
တကယ် အဖြစ်မှန် ကသန့်ှရှင်းနဲ့တည်မြဲကွဲကြတော့ဒေါ်ခင်ကြည်ကဦးနုရဲ့သန့်ရှင်းဘက်က
မဲဆွယ်ပေး ခဲ့တယ်၊၊ဒါကြောင့် ဦးနုရဲ့ သန့်ှရှင်းမဲနိုင်သွားပြီးအစိုးရဖွဲ့နိုင်တော့ဒေါ်ခင်ကြည်ကို
ကျေးဇူး ဆပ်တဲ့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးနဲ့ ယခုအချိန်အထိ တစ်ဦးတည်းသော
အမျိုးသမီး သံ အမတ်အဖြစ်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ပြီး
ချီးမြှောက်ခဲ့တာပါ၊ ဒေါ်စုက တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်ပြီးကာစပဲ ရှိအုံးမယ်၊၊ဒေါ်စုမွေးတာက
(၁၉၄၅)၊ ဒေါ်ခင်ကြည်ကို သံအမတ်ခန့်တာက (၁၉၆၁)၊ တွက်ကြည့် (၁၆)နှစ်သမီးပဲရှိသေးတယ်၊၊
အိန္ဒိယမှာ ကျောင်းဆက်တက်တာတွေ၊ အောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရအောင် အိန္ဒိယမှာ
ကျူရှင်ယူခဲ့ရတာတွေ၊ သူများတွေ နှစ်ချီပြီး ကြိုးစားရတဲ့ အောက်စ်ဖို့ဒ်ဝင်ခွင့်ကို ဒေါ်စုက
လပိုင်းလောက်နဲ့ ကြိုးစားခဲ့ရတာတွေကို သူကိုယ်တိုင်ပြောထားတာတွေ ရှိပါတယ်၊၊
ဒေါ်စုသားသမီး တစ်ယောက်လုပ်နေပီးဘာလို့မသိရတာလဲ၊ဘာလို့ မှန်းတုပ်ရမ်းတုပ်လုပ်ရတာလဲ၊၊
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သားသမီးတွေအနေနဲ့ တစ်ရပ်တစ်ကျေးမှာ မဖြစ်သင့်တာတွေ မဖြစ်ရအောင်
အင်္ဂလန်ကိုလွှတ်လိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးနေ၀င်းက ဒေါ်ခင်ကြည်ကိုသတိပေးစကားပြောကြား
ခဲ့တာတွေ သမိုင်းအနေနဲ့ ရှိပါတယ်၊ ဆိုတော့ ဒေါ်စုကို အင်္ဂလန်ကိုသွားအောင် ဦးနေ၀င်းက
ဒေါ်ခင်ကြည်ကိုအိန္ဒိယပို့တာ ဘယ်သူလဲဆိုတာ လေ့လာဖို့ပါ၊သူ့ဘာသာသူ တွေ့ကရာနဲ့ကြိုက်၊
တွေ့ကရာနဲ့ယူပြီးတော့မှဟိုအပြစ်တင်၊ ဒီအပြစ်တင်လုပ်နေတာကတော့ မကောင်းပါဘူး၊၊
မကြာခဏကိုးကားနေကြတဲ့ ကျမ ဧရာဝတီတိုင်းမှာ နေခဲ့ရင် ရှင်နဲ့ညားမှာပေါ့ ဆိုတဲ့စကားဟာ
အင်မတန် အနှစ်သာရကင်းမဲ့ပါတယ်၊ ရောက်ရာနေရာမှာ တွေ့ရာလူနဲ့ မဖြစ်မနေ
ယူလိုက်ရလောက်အောင် (ကန်တော့ပါရဲ့) မနေနိုင်၊ မထိုင်နိုင်ဖြစ်ခဲ့လို့လား၊ ကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုး၊
သူတစ်ယောက်တည်းအတွက်တော့ သူ့ဆန္ဒကို ဦးစားပေးခဲ့တာ ပြောစရာမရှိပါဘူး၊၊
အမျိုးသားအရေးမှာတော့ အင်မတန်ကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုကြီးတစ်ခုကို ကျူးလွန်ခဲ့တာပါပဲ၊၊
အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အဆိုတင်သွင်းပါတယ်၊ အဲဒီဝန်ကြီးချုပ်လောင်း အမျိုးသမီးကကိုရီးယား
အချင်းအိမ်ထောင်ပြုပြီး သားသမီးမွေးတဲ့အခါ အမေရိကန်မှာ သွားမွေးပါတယ်၊ အဲဒီမှာမွေးရင်
natural citizen ရလို့ပါ၊ သားသမီးရဲ့ ပညာရေးအတွက် ဒီလိုကြံစည်ပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ၊၊
ဆိုပါတော့ အဲဒီ အမျိုးသမီးရဲ့ သားနှစ်ဦးကအမေရိကန်မှာပညာသင်ကြားပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသား
ခံယူကြပါတယ်၊ အဲဒါက ဘာမှ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပေမယ့်ဝန်ကြီးချုပ်အမည်စာရင်းတင်သွင်း
ခဲ့ရတဲ့အခါမှာ သူ့သားနှစ်ဦးက အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေကြလို့ပါလီမန်ကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်၊
သူဝန်ကြီးချုပ် မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး၊ တောင်ကိုရီးယားပါလီမန်က မျက်ကန်းမျိုးချစ်တွေကြောင့်ပေါ့၊၊
မကြာသေးမီက ဒီမှာလည်း ဒုသမ္မတရွေးရာမှာ တစ်ပြေးခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေကို
ဘာကြောင့် ပယ်ခဲ့ရတာလဲ၊ ဥပဒေမဲ့ လျှောက်ပြော၊ လျှောက်လုပ်လို့ မရပါဘူး၊၊နိုင်ငံတော်
အကြီးအကဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရည်အချင်းတွေကို မြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးစီးရေးဆွဲပြီး ချမှတ်ခဲ့တာပါ၊ ၂၀၀၈-ဥပဒေမှာလည်း အဲဒီအချက်ကိုပဲ
မပြောင်းမလွဲ ဒီအတိုင်းပြဌာန်းခဲ့တာပါ၊ အဲဒါကို သူ့သမီးက ဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ၊၊
ဘယ်အာဏာရှင်ကမှ သူ့ကို တားမြစ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး၊၊ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဖခင်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက် သူ့သမီးကို သူကိုယ်တိုင်တားမြစ်ထားခဲ့တာပါ၊၊
ဒေါ်စုအနေနဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မတင်သင့်ပါဘူး၊ နိုင်ငံခြားသားကို ယူခဲ့မိတဲ့ သူကိုယ်တိုင်ကို
အပြစ်တင်ချင်တင်၊ နိုင်ငံခြားသားနဲ့ ပတ်သက်သူကို နိုင်ငံ့အကြီးအကဲ မတင်ဖို့ တားမြစ်ခဲ့တဲ့
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်တဲ့ တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်ကို အပြစ်တင်ချင်တင်၊၊ ဒီနှစ်ချက်ပဲ
လုပ်သင့်ပါတယ်၊၊ သူ့အရည်အချင်းကို အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်၊၊ သူ ဦးဆောင်ရင် တိုင်းပြည်
တိုးတက်မှုမြန်မယ်ဆိုတာကိုလည်း ယုံကြည်ပါတယ်၊၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့တော့
နိုင်ငံရဲ့ အခြေခံဥပဒေကို စက္ကူစုပ်ဖြစ်အောင် မလုပ်သင့်ပါဘူး၊၊သူ့တစ်ယောက်တည်းအတွက်
အခုအချိန်မှာ အဲဒီအချက်ကို ပြင်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံဟာ သာလာယံဇရပ်စုပ်လို ၀င်ချင်သူဝင်၊
ထွက်ချင်သူထွက် လုပ်ချင်ရာလုပ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်၊၊အဓိကကလူထက်စနစ်ကသာ
အရေးကြီးတာပါ၊၊ စနစ်ကောင်းတစ်ခု အခြေခိုင်ခိုင် တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ရင် ဘယ်သူပဲ ခေါင်းဆောင်၊
ခေါင်းဆောင် စနစ်က သူ့ဘာသာ လည်ပတ်နေပြီး လူက စနစ်ပေါ်မှာ အလိုက်သင့် လိုက်နေရုံပါပဲ၊
အမေရိကန်မှာ စနစ်က အခြေခိုင်ပြီး ဖြစ်လို့ ဘယ်သူတက်တက် ဒီအတိုင်းပါပဲ၊ ဒီမှာလည်း
လူတစ်ယောက်ကို အားကိုးတာထက် စနစ်ကောင်းတစ်ခု အခြေခိုင်အောင် ၀ိုင်းဝန်း
တည်ဆောက်သင့်ပါတယ်၊၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ တိုင်းပြည်
တိုးတက်ခဲ့တာပါပဲ၊အဲဒီအချိန်က ဒေါ်စုတောင် လူမမယ်အရွယ်လောက်ပဲ ရှိသေးတာပါ၊သူလုပ်မှ
တိုင်းပြည်တိုးတက်မယ်ဆိုတာကတော့ (personal cult) ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှု သက်သက်သာ
ဒေါ်စုအနေနဲ့လည်း ဘယ်သူမပြု မိမိမှုကို ကိုယ့်အခွင့်အရေးအတွက် အခြားသူတွေကိုအပြစ်တင်ပြီး
နိုင်ငံအတွက် ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ဥပဒေကို ပယ်ဖျက်ဖို့ မကြိုးစားပဲတိုင်းပြည်
ခေါင်းဆောင်သားသမီးတစ်ဦးအနေနဲ့ မကျူးလွန်သင့်တဲ့အပြစ်ကို ကျူးလွန်မိခဲ့တဲ့အတွက်
အပြစ်ချေတဲ့အနေနဲ့ ကျရာကနေ နိုင်ငံအကျိုး သယ်ပိုးသင့်ပါတယ်၊၊ ဘယ်နေရာကပဲလုပ်ရလုပ်ရ
နိုင်ငံအတွက် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်မွေးသင့်ပါတယ်၊၊ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး ကြိုးစားနေတယ်
ဆိုရင်မိမိကြောင့် ပြည်သူလူထုအတွင်း စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုမဖြစ်ရအောင် ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
...ကျွန်တော်တို့ သာမန်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လည်း အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲပြားစေမယ့် အလုပ်တွေ
မယားကောင်းဆိုတာ အိပ်ယာထဲမှာ သစ်တုံးလို၊ ကျောက်ရုပ်လို မနေရဘူး.. ပြည့်တန်ဆာလို နေရ-ကျင့်ရတယ်
Posted by drmyochit Monday, August 19, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
ဆရာရှင့် ကျွန်မရဲ့စိတ်အကြောင်းမေးချင်လို့ပါ။ ကျွန်မနဲ့ကျွန်မအမျိုသား အတူနေတဲ့အခါ ကျွန်မယောက်ျား ကပြောပါတယ် ကျွန်မကို ကျောက်ရုပ်ကြီးကျနေတာပဲတဲ့။ သူ့ကိုစိတ်ပါသေးရဲ့ လားလို့လဲ မေးပါတယ်။ ကျွန်မဘာလို့အဲဒီ့လိုဖြစ်နေရတာလဲ။ အမှန်တိုင်းပြောရရင် ကျွန်မတို့အိမ်ထောင်သက် ၂ နှစ်ပြည့်ခါနီးပေ မယ့် ကျွန်မရှက်တုန်းပဲ။ ကလေးတစ်ယောက် ရသွားပေမယ့် ရှက်နေတုန်းပဲ။ အဲဒါဘာဖြစ်လို့ပါလည်းရှင်။ သူ့အပေါ်တာဝန်မကျေသလို ခံစားရပါတယ်။ သူ့အပေါ် တာဝန်ကျေချင်ပါတယ်ရှင့်။ ပြောပြပေးပါဦး။
မေးတဲ့သူဟာ အခုလိုမေးသင့်တယ်လို့ထင်တဲ့၊ စိတ်ဆန္ဒရှိနေတာဟာ အလားအလာအတော်ကြီး ကောင်းပါ တယ်။ ရှက်စိတ်ရှိတာ ပုံမှန်ပါ၊ လူဆန်ပါတယ်။ အကြံတခုပေးချင်တာက ဒီလိုရှက်စိတ်ဟာ “ကြိုက်မရှက်၊ ငိုက်မရှက်၊ ငတ်မရှက်" ဆိုတာ လူတိုင်းအသိပါ။ ပြောဘို့ မယဉ်ကျေးတဲ့ မရှက်တရား နောက် တပါးကတော့ “တရားဝင် အကြင်လင်မယား နှစ်ဦးသားဟာ ဆက်ဆံရာမှာ
ရှက်နေစရာ မလိုဘူး”။ ဒါဖြင့်ရင်“အရှက်ကိုမရှိရတော့မှာလား”ဆိုတာတော့လဲမဟုတ်ပါ။ လင်မယားတွေ ပေါင်းလာကြတာ နှစ်တွေ အများကြီးကြာပေမဲ့လဲ ဘယ်အရေးကိစ္စမှာမဆို သူသူကိုယ်ကိုယ် ရှက်နေကြရသေးတာပါ။ အဖိုးကြီး၊ အဖွါးကြီးဖြစ်တဲ့အထိပါ။
ဒါပေမဲ့ အခုမေးလာသူလို လိုအပ်ချက်ရယ်လို့ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ ပြင်ယူရပါလိမ့်မယ်။ တနှစ်က သတင်းစာမှာ ဖတ်ရတယ်။ ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် အားကစားမယ်တယောက် ရုပ်ရည်ကလဲ အင်မတန်ချော ပါတယ်။ သူ့ (ဘွိုင်း-ဖရင်း) က ပြောတယ် “အိပ်ယာထဲမှာဆို ဒီမိန်းကလေးဟာ သစ်တုံးလိုဘဲ” တဲ့။ သူတို့ဆီကတော့ အကြင်လင်မယားမဖြစ်သေးလဲ အဲလို နေကြတာကထုံးစံပါ။ နာမည်ကြီးသူဆိုရင် သတင်းလိုက်သူတွေကလဲ ရှောင်လို့မရဘူး။ ပြန်ပြောပေါ့ “ကျမတယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး (ဆယ်လီဘရက်တီ) အပျိုမလဲ ကျမလိုပါဘဲ” လို့။
မြန်မာအရပ်စကားတခုလဲ ရှိသေးတယ်။ “မယားကောင်းဆိုတာ အိပ်ယာထဲမှာ ပြည့်တန်ဆာလို နေရ-ကျင့်ရတယ်” တဲ့။ ဒီအကြံပေးချက်ဟာ လက်တွေ့ဘဝတွေကနေ လာပုံရတယ်။ တခုရှိတာက ကိုယ်ခန္ဓာ ရောင်းစားသူတွေ၊ ငွေယူပြီး လိင်ဇာတ်ကား ရိုက်ပေးသူတွေဟာ ကြည့်တဲ့သူတွေပို သဘောကျ၊ အားကျစေအောင် တမင်တကာ သရုပ်ဆောင်ကြရတယ်။ ဥပမာ အမျိုးသမီးတွေက ခံစားမှုရှိနေသယောင်၊ သာယာနေသယောင် သရုပ်ဆောင်ကြတယ်။ ဒါတင်မကဘူး လိင်ဆန္ဒ ပြည့်ဝ ပြီးစီးတာကိုပါ အတုလုပ်လေ့ရှိတယ်။ ဒါကို Women Fake Orgasm လို့ခေါ်တယ်။
နောက်တခုလဲ ကြားဘူးကြမှာပါ။ “ယောက်ျားသား ဖေါက်ပြားတာဟာ သူ့မိန်းမက အလိုကို လိုသလို မဖြည့်နိုင် လို့” ဆိုတာ။ ဒီအချက်က တဝက်တပျက်သာ မှန်ပါမယ်။ ဖေါက်ပြားချင်သူ ဆိုတာ ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ် မိန်းမဖြစ်ဖြစ် စ (ဇ) ရှိသူတွေက ဇနီးမယား၊ ယောက်ျား ခင်ပွန်းဘက် က ပြောစရာမလိုပေမဲ့ ဖေါက်ပြန်ကြပါတယ်။
လင်မယားနေကြရာမှာ အချိန်ကာလအရ တိုးတက်လာကြရတယ်။ မေးတဲ့သူလဲ တိုးတက်လာအောင် လုပ်သင့်ပါတယ်။ ပိုပြီး နားလည်လာရမယ်။ သာယာမှုရှာတဲ့နေရာမျိုးမှာ ပိုပြီးသာယာမှုကိုဖြစ်လာစေ သင့်တယ်။ ခွင့်လွှတ်စရာမျိုးကို ပိုပြီး ခွင့်လွတ်လာကြတာမျိုးလိုပါဘဲ။ အပြန်အလှန်ပါဘဲ။ ယောက်ျား လုပ်သူကလဲ နားလည်မှု ပြန်ပေးဘို့လိုတယ်။ မိန်းမသဘာဝဟာ တမျိုးဆိုတာ သိသင့်တယ်။ ပိုးပြီးရှက် တတ်တယ်။ လိင်စိတ်ဖြစ်လာတာ အချိန်ပိုယူတယ်။ အခါတိုင်း အပြီးမသတ်ပေမဲ့ သိပ်ကိစ္စမရှိတတ်ဘူး။ လစဉ်ဓမ္မတာနဲ့အတူ ဟော်မုန်းသတ္ကိကြောင့် လိင်စိတ် အတက်အကျ ရှိတတ်တယ်။ အိမ်ထောင်မကျ ခင်ဘဝ၊ နောက်ခံ (လိင်) ကျန်းမာရေးသုတ ဆိုတာမျိုးကို တမင်တကာ လိုက်ရှာနေတတ်သူမျိုး ဆိုတာ ယောက်ျားတွေနဲ့ယှဉ်ရင် အရေအတွက်နည်းပါးတယ်။ ဒီတော့ လိုနေတယ်ထင်ရင် ပြင် လာစေအောင် ကူညီရမယ်။ သုတအရလိုနေရင် သုတဖြည့်ပေးပါ။ ကျန်းမာရေးကြောင့်ဆိုရင် ခွင့်လွတ်ပေးပါ။ တိုးတက်လာတိုင်း အသိအမှတ်ပြုပေးပါ။
လိင်မှုကိစ္စဟာ တခြားအရေးအရာတွေလိုဘဲ။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ပါဝင်ပတ်သက်ရတယ်။ လက်လုပ်တီးတာ လက်နှစ်ဖက် ပါရသလိုမျိုး။ လက်နှစ်ဖက်တော့ ဟုတ်ပါရဲ့ တဖက်လက်ဝါးက ဖြန့်ကော့ထားရင် မည်တဲ့ လက်ခုပ်သံက မပြီသဘူး။ တက်ညီ-လက်ညီ ရှိကြတာ ကောင်းတဲ့ဂုဏ်တရပ်ပါ။ ရှေ့သွား၊ နောက်လိုက် ညီကြတယ်ဆိုတာ အများအမြင်သာ ဖြစ်တယ်။ ဘက်ညီတယ်ဆိုတာမှာ အတူနေတဲ့ကိစ္စလဲ ပါသင့်တယ်။
From : .. ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး၏ ပြစ်ဒဏ်များကို နေပြည်တော်အသင်း အယူခံဝင် ၍ ရန်ကုန်အသင်း အယူခံမဝင်
၀ဏ္ဏသိဒ်္ဓိကွင်းဖြစ်ရပ်အတွက် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီမှ ချမှတ်ခဲ့သော အိမ်ကွင်းအပိတ်ခံရ သည့်ပြစ် ဒဏ်မှာ ပြင်းထန်လွန်းကြောင်း နေပြည်တော်အသင်း ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသီဟက သုံးသပ်ပြောကြား ခဲ့သည်။
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ၏သြဂုတ် ၁၃ ရက်က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ၀ဏ္ဏသိဒ်္ဓိကွင်းဖြစ်ရပ်အတွက်
နေပြည်တော် အိမ်ကွင်းဖြစ်သော ပေါင်းလောင်းကွင်းတွင် လာမည့်နှစ် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ပ-ကျော့ ပွဲစဉ်များအားလုံး ကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့သည့် ပြစ်ဒဏ်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယင်းပြစ်ဒဏ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဦးစိုးသီဟက “ပြစ်ဒဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မျှတတယ်၊ မမျှတဘူးဆိုတာ ပြစ်ဒဏ်ချတဲ့သူတွေ သိပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်က အမြင်ကိုပြောရရင် ပြင်းထန်လွန်းတယ် ထင်ပါတယ်။ အိမ်ကွင်းရာသီဝက် တောင် အပိတ်ခံရမှာ ဆိုတော့လေ။
နိုင်ငံတကာမှာလည်း ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုးတွေရှိတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်ကြီး အိမ်ကွင်းအပိတ်ခံရတာမျိုးတော့ မကြား ဖူးသေးဘူး။ ကျွန်တော်မသိတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် အသင်းဘုတ် အဖွဲ့ အစည်း အဝေး ထိုင်ပြီး အယူခံဝင်ဖို့ရှိပါတယ်” ဟု မဇ္ဈိမသို့ ပြောသည်။
ထို့အပြင် နေပြည်တော်အသင်းအနေဖြင့် စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေးမှ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခဲ့သော ကစား သမား များကို အသင်းမှလည်း ထပ်မံအပြစ်ပေးရန် စီစဉ်ထားကြောင်းလည်း ဦးစိုးသီဟက ဆက်လက် ပြောကြား သည်။
“စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးက ပြစ်ဒဏ်ချခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေကိုလည်း အသင်းက အပြစ်ပေးဦးမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ပြစ်ဒဏ်က ပြင်းထန်လွန်းတဲ့အတွက် ကစားသမားတွေဘက်ကိုလည်း ငဲ့ရဦးမှာပါ။ အရမ်းပြင်းထန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
နေပြည်တော်-ရန်ကုန်ပွဲဖြစ်ရပ်အတွက် သြဂုတ် ၁၃ ရက်က ချမှတ်ခဲ့သော စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ၏ ပြစ်ဒဏ် များ ကို အယူခံဝင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်း မီဒီယာတာဝန်ခံ ကိုအောင် ပိုင်က မဇ္ဈိမသို့ အတည်ပြုပြောကြားသည်။
အဆိုပါပွဲစဉ်တွင် နှစ်ဖက်ကစားသမားများ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်အတွက် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှ
ပြစ်ဒဏ် ချခဲ့ပြီး ရန်ကုန်အသင်း လက်ထောက်နည်းပြ ဦးတင်မောင်ထွန်းနှင့် ကြည်လင်းတို့ကို သုံးပွဲ ပယ် ပြစ်ဒဏ်နှင့် ဒဏ်ငွေငါးသိန်းစီချမှတ်ခဲ့သည်။
ယင်းပြစ်ဒဏ်နှင့်ပတ်သက်၍ကိုအောင်ပိုင်က “ကျွန်တော်တို့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေက ဒီပြစ်ဒဏ် နဲ့ပတ်သက်ပြီး အယူခံ မ၀င်ဘူး ပြောပါ တယ်။ ပြစ်ဒဏ်နဲ့ပတ် သက်ပြီးတော့ကျွန်တော့် တစ်ဦးတည်း အမြင်ကို ပြော ရရင် နည်းပြ ဦးတင်မောင်ထွန်းရဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကမမျှတဘူးထင်ပါတယ်။ သူ့ကို ကွင်းထဲဝင်လာတဲ့ ပရိသတ်က အရင်ရန်လုပ်တာ လေ။ သူကစပြီး လိုက်ထိုးတာမှမဟုတ်တာ။ ဒီပြစ်ဒဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူလည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
"ကျွန်မ အပျိုစစ်စစ်ပါမောင် ... ဆိုတဲ့ ခေတ် ... မှုန်ဝါးဝါးကျန်ခဲ့ပြီ"
မိန်းကလေးတစ်ယောက် အတွက်တော့ အပျိုစစ်စစ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ဟာ ဘာနဲ့မှ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အရာပါ။ တတ်နိုင်ရင် ... ကိုယ့်အပျိုဂုဏ်လေးကို ထိန်းသိမ်းပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သင့်တာ ... မြန်မာမိန်းကလေးမှ မဟုတ်ဘူး .. ကမ္ဘာမှာ ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းပါ။
ဒါပေမယ့် ... ဘဝတစ်ကွေ့မှာ ကံအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ .. ငယ်ရွယ်နုပျိုချိန်မှာ အမှားအယွင်းကြောင့်ဖြစ်စေ ... ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ် အပျိုဘဝကို ယုံကြည်လို့ ပေးဆပ်မိခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးတွေ ... အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ပြီးမှ အိမ်ထောင်ဖောက်ပြန်လို့ ကွဲရတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ... အပျိုစစ်စစ် မဟုတ်တော့တဲ့ မိန်းကလေး ဖြစ်သွားရင်ရော ... လောကကြီးမှာ မျက်နှာငယ်စရာ .. အားငယ်စရာ ... စိုးရွံကြောက်နေဖို့ လိုသလားးး
ကျွန်မ အပျိုစစ်စစ်ပါမောင် .. .ဆိုတဲ့ ခေတ် .... မှုန်ဝါးဝါးကျန်ခဲ့ပြီ
တာလီဘန်တို့က မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်သင်တန်းတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ထားသည်ဟု အိန္ဒိယသတင်းစာတွင် ဖော်ပြ
Posted by drmyochit Monday, August 19, 2013, under သတင်းများ | No comments
အူရဒူဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော အင်တာနက် ဖိုရမ်တစ်ခုတွင် ပါရှိသည့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိသော ဓာတ်ပုံ ၂၀ ကျော်အရ တာလီဘန်များသည် ရိုဟင်ဂျာများဟုခေါ်သည့် မွတ်စလင်များ၊ ဘင်္ဂ လားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားများနှင့် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသားများကို စုစည်းကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လျှို့ဝှက်နေရာ တစ်ခု တွင် စစ်သင်တန်းများ ပေးနေကြောင်း အိန္ဒိယအခြေစိုက် Asian News International (ANI) သတင်းဌာ န၏ ရေးသားမှုကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အင်တာနက် သတင်းစာတစ်စောင်တွင် သြဂုတ် ၁၇ ရက်က ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာ တစ်ခုတွင် ဇူလိုင် ၁၂ ရက်က အူရဒူဘာသာဖြင့် ပုံစာရေးထိုးထား ပါရှိခဲ့သည့် အဆိုပါ ဓာတ်ပုံများကို ‘Bab-e-Islam Jihadi Internet Forum’ တွင် ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ၀ါရှင်တန်မြို့ အခြေစိုက် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မီဒီယာသုတေသနသိပ္ပံ (MEMRI) ၏ ဂျီဟက်နှင့် အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက်မှု စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (JTTM) သုတေသနအဖွဲ့၏ ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
စစ်သင်တန်းပေးမှုတွင် သင်တန်းသားဦးရေ ၁၀၀ မှ ၂၀၀ အကြား ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ဓာတ်ပုံများတွင် ပါရှိသည်။
ယခု ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံများတွင် လူတစ်စုသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တစ်နေရာ၏ စစ်သင်တန်းတစ်ခုတွင် လေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်နေသည်ကို တွေ့မြင်ရသော်လည်း အဆိုပါ လေ့ကျင့်ရေးစခန်း၏ နေရာကို အတိအကျ ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပေ။
ထို့ပြင် တပ်သားသစ်များ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် မြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှ တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ် နှစ်စီးနှင့် စစ်သား ၁၇ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်ဟု အဆိုပါ သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
သင်တန်းသားများက ၀တ်ပြုဆုတောင်းနေသည့် ပုံတစ်ပုံကိုလည်း ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
မျက်နှာများကို ၀ါးထားသည့် ဓာတ်ပုံများတွင်လည်း တာလီဘန် အဆင့်မြင့် အရာရှိများက သင်တန်းပေးသည့်ပုံများ ပါရှိခဲ့သည်။
အူရဒူဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသည့် ပုံစာကို JTTM အဖွဲ့က ဘာသာပြန်ဆို ဖော်ပြခဲ့ရာတွင် “ဤဂျီဟတ်တပ်ဖွဲ့သစ်သည် တပ်မှူးဆူဖီယာနှင့် အဘူအာရစ်တို့၏ ကွပ်ကဲမှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်” ဟု ရေးသားထားသည်။
MEMRI သည် အစ္စလာမ္မစ် အစွန်းရောက် မီဒီယာများတွင် ရေးသားထားသည့် အကြောင်းအရာများ၊ လူမှုမီဒီယာများတွင် ဒေသသုံး ဘာသာဖြင့် ချိတ်ဆက်လှုပ်ရှားမှုများကို ဘာသာပြန်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းများကို အထူးပြု လုပ်ဆောင်နေသည့် သုတေသနအဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
ညောင်ဦးတွင် ပြင်သစ်အမျိုးသမီးအား ရိုက်နှက်လုယက်သွားသူကို ရဲတပ်ဖွဲ့က နှစ်ပတ် အတွင်း ဖော်ထုတ် ဖမ်း ဆီးနိုင်ခဲ့
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် ကင်တားနား အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ခဲ့တာ ယခု တစ်ကြိမ်နဲ့ဆိုရင် (၇) ကြိမ်တိုင်တိုင်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ခရီးစဉ် (၆) ကြိမ်နဲ့ ပတ် သက်ပြီး ကင်တားနားက ဘက်လိုက်ကြောင်း ဝေဖန်သံများ မြန်မာလူထုအကြားမှာ သိသိသာသာ ကြားလာ ရပါတယ်။ ရခိုင်အရေးအခင်း ဖြစ်ပြီး မကြာခင် ကင်တားနား ရောက်ရှိလာရာ ရခိုင်ဒုက္ခ သည်များ ကို မတွေ့ ဘဲ ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်များနှင့်သာသီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ် ချိန် မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင်လူထုကို လူဆိုးလူမိုက်များအဖြစ် တစ်ဖက်သက် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘင်္ဂါလီဟု မသုံးနှုံးဘဲ ရိုဟင်ဂျာ ဟု သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။
ကင်တားနားရဲ့ ဘက်လိုက်မှုတွေကို ဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေက ကိုယ်တွေ့ခံစားရသူတွေ ဖြစ်လို့ အသိ ဆုံးဖြစ် ပါတယ်။ ပဋိပက္ခကြောင့် ဒုက္ခရောက်ချိန်မှာ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ အကူအညီတွေ လာတယ် ဆိုတာကြောင့် ရခိုင်ဒုက္ခသည် များ ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပေမယ့် ကင်တားနားရဲ့ ဘက်လိုက်မှုတွေကို သိရှိပြီးနောက် ပိုင်းမှာ ရခိုင်ဒုက္ခသည်များဟာ ကုလ NGO တွေ က ထောက်ပံ့တဲ့ အစား အစာ နဲ့ ဆေးဝါးတွေ ကို တောင် မယူတော့ဘဲ အငတ်ခံကြရတဲ့အထိ ဖြစ်လာပါတယ်။ရခိုင်ပြည် နယ် ဟာ ပြည် မကြီးနဲ့ သွား၊ လာရတာ အလွန်ခက်ခဲပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားအများစုမှာလည်း ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းနဲ့ စိုက်ပျိုးရေး နဲ့သာ ရပ်တည်နေထိုင်ကြရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှု ဒဏ်ကို လည်း အများ ဆုံးခံစား ရသူများဖြစ်ပေ မယ့် ရခိုင်တိုင်းရင်သားတို့ စိတ်မပျက်ခဲ့ကြပါဘူး။ အခုနောက်ဆုံး ဘင်္ဂါလီ ဒဏ်ကို အနှစ်နှစ် အလလ သည်းခံခဲ့ပြီး လုံးဝမခံ စားနိုင်တော့လို့ ပွင့်အန်ထွက်လာကြတာပါ။ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စား လှယ် ကင်တားနား ကတော့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ အခွင့်အရေးကို လစ်လျူရှု ထားပါ တယ်။မသီတာတွေး ကို မုဒိန်းကျင့်ပြီး အသတ်ခံရ မှု၊ စစ်တွေတက္က သိုလ်ကျောင်း သူ တစ် ဦး အသတ် ခံရမှု၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့ နေအိမ်များ မီးရှို့ခံရမှုများအတွက် လူသားချင်းစာနာဖို့ တစ်စုံ တစ်ရာ ပြောဆို ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဘင်္ဂါလီများ ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်း အချင်းချင်း မုဒိန်းကျင့်နေမှု၊ မူးယစ်ဆေး ဝါး ရောင်းဝယ် မှုများ ရှိနေတာကိုလည်း မျက်ကွယ်ပြုနေခဲ့ပါတယ်။
ကင်တားနား အနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့် အရေး ကြေညာ စာတမ်းပါ အချက် (၃၀) နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲက ဘင်္ဂလီဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ဘဝကို တိုင်းတာခဲ့ ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က မွတ်ဆလင်နိုင်ငံအသီသီးက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ လူ့အခွင့်အရေး ဆုံး ရှုံးနေတာ ကိုတော့ ၎င်း နဲ့ မသက်ဆိုင်သကဲ့သို့ တစ်ခွန်းမှ မပြောခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူး ကိုယ်စားလှယ် လုပ်နေတဲ့ ကင်တားနားဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်း နဲ့ ဥပဒေ ကိုတော့ လေးစား ဖို့လို ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီလတွင် (၅) ကြိမ်မြောက်ခရီးစဉ်မှာ ကင်တားနားမှ ဘင်္ဂါလီ များကို မြန်မာ တိုင်းရင်း သားအဖြစ်လက်ခံဖို့ အစိုးရကို ဖိအားပေးလာရုံမျှမက ၁၉၈၂ မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ ကိုပါ ပြင်ဆင် ဖို့ ပြောလာ ရာ မြန်မာလူထု တစ်ရပ်လုံး ဒေသ အမျက် ချောင်းချာင်း ထွက်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးမှ ဒုက္ခသည်များ ကို ကုသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာ မင်းကြီးရုံးမှ ခွင့်ပြု လျှင် တတိယနိုင်ငံ များသို့ တဖြည်းဖြည်းပို့ဆောင်ပေးဖို့ ပြောဆိုခဲ့သဖြင့် အစိုးရကို ဖိအားပေး လို့မရ ချိန်မှာ လွှတ်တော် ဘက်ကို ကင်တားနား လှည့်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။နေပြည်တော် သို့သွားရောက်ပြီး အထက် လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ ဒုဥက္ကဌနဲ့ ကော်မတီ (၁၂) ခုက ဥက္ကဌ တွေနဲ့ တွေ့ချိန်မှာ ကင်တားနားမှ တည် ဆဲဥပဒေတွေ ကို ပြင်ဆင်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပြန်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ မှ ကင်တားနား အစား အခြား ကိုယ်စား လှယ်တစ် ဦး ပြောင်းခန့်ဖို့အထိ တောင်းဆိုမှုကို ကြေညာချက်တစ်ခုအဖြစ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါတယ်။ ကြေညာချက်တွင် ကင်တား နား မှ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ဒေသခံပြည်သူများ၏ဆန္ဒကို အလေး မထား ဘဲ တစ်ဖက်သတ် ပြောဆိုသွားကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာဟု မသုံးရန် တိုက်တွန်းလိုကြောင်း၊ ဘူးသီးတောင် နှင့် မောင်းတောတွင် အဆမတန် လူဦးရေပေါက်ပွားမှုကြောင့် ရခိုင်ဒေသခံတွေ ဒုက္ခရောက်နေသည်ကို ကင်တားနား မှ လူသားချင်းစာနာမှု လုံးဝမရှိတဲ့အပြင် ကုလလက်အောက် အဖွဲ့များ နဲ့ INGO များက ခိုးဝင် လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီများကို တစ်ဖက်သက် ကူညီနေကြကြောင်း၊ ဒုက္ခသည်အချင်းချင်းပင် ခွဲခြား ဆက်ဆံနေ ကြောင်း၊ ၈၂ နိုင်ငံသားဥ ပဒေပြင်ဆင်ဖို့ တောင်းဆိုခြင်းက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေပြုခွင့်အာဏာကို ဝင်ရောက် စွက်ဖက်ရာရောက်နေကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည် နယ် တွင်ပြဿနာများတွင် ပဋိပက္ခဇစ်မြစ်ကို မသိဘဲ တစ်ဖက်သက် အမြင်နဲ့ ဖိအားပေးပြောဆိုနေသဖြင့် သမာသမတ်ကျသည့် အထူးကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ပြောင်းလဲ တာဝန် ပေးရန် တောင်း ဆိုပါကြောင်း ကြေ ညာ ချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုဇာဂနာ ၊ ကိုကိုကြီး တို့ပါဝင်တဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှ စနစ်တကျ အချိန်ယူ လေ့လာစုံစမ်းပြီးနောက် ရလဒ်များနဲ့ အကြံပြုချက်များကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့် ၂၀၁၃ မေလ တွင် ကင်တားနားက အဆိုပါ စုံစမ်းရေးကော်မ ရှင်ရလဒ်ကို ကန့်ကွက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ကင်တားနား၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဘင်္ဂါလီများ (၄င်းအ ဆို ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင်များ) သည် အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရသဖြင့် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့သည်ဟု ဆိုထားပြီး ဘင်္ဂါလီများ လွတ်လပ်စွာသွားလာ ခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ ကော်မရှင်က အကြံပြု ထားခြင်း မရှိကြောင်း ဝေဖန်ထားကာ ဘင်္ဂါလီများ နိုင်ငံသားဖြစ်ရေးအတွက် ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေ ကို ပြင်ဆင် ရမည်ဆိုသောမှတ်ချက်များ၊ ပဋိပက္ခဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဘင်္ဂါလီခေါင်းဆောင်ဒေါက် တာ ထွန်းအောင် ကို လွှတ်ပေးရမည်ဆိုသော ပြောဆိုချက်များ ပါဝင်ပါတယ်။
လူသားချင်းစာနာဖို့ နဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့ ပါးစပ်က မချသော်လည်း မိတ္ထီလာတွင် ဦးသောဘိတ ရက်ရက်စက်စက် အသက်ခံရမှု၊ လားရှိုးတွင် မအေးဝင်း ဓာတ်ဆီလောင်းမီးရှို့ခံရချိန်၊ မလေးရှားမှ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူနည်းစုအကြမ်း ဖက်ချိန်များမှာတော့ ကင်တားနား နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့သည်။ ကင်တားနား၏ သိသိ သာသာ ဘက်လိုက်မှုများကြောင့် ၂၀၁၂ ဇွန်လ နောက်ပိုင်း ခရီးစဉ်များ တွင် မြန်တိုင်းရင်း သားများ က ဆန္ဒပြ မှုများ အမြဲလိုလို ကြုံခံ့ရပါတယ်။ မန္တလေးတွင် ဆရာတော်များဦးဆောင်က သမ္မတဦး သိန်းစိန် ကို ထောက်ခံကြောင်းနဲ့ ကင်တားနားကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ UN ရုံးရှေ့တွင် လည်း ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး ယခု ၂၀၁၃ သြဂုတ်လ ခရီးစဉ်တွင်လည်း စစ်တွေမြို့အဝင်ကတည်းက ဆန္ဒပြနေကြပြီ ဖြစ် ပါတယ်။ ကင်တားနားအရေးသည် အမျိုးသားရေးဖြစ်ပြီး ရခိုင်များကိုဖိနှိပ်ပြီး ဘင်္ဂလီများ အပေါ် ဘက်လိုက်မှုကလည်း မြန်မာတိုင်းရင်းသားအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သော အရေးဖြစ်ပါတယ်။
ကင်တားနား အနေဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နိုင်ငံများ၏ အထောက်ပံ့ကြောင့်သော် လည်းကောင်း၊ မြန်မာ အစိုးရကို အတိုက် အခံလုပ်လို၍သော်လည်းကောင်း၊ UN နှင့် အမေရိကန်တို့၏ မူဝါဒ အရသော် လည်းကောင်း တစ်ဖက်သက် ဘက်လိုက် ကာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားများကို ဖိနှိပ်ပြီး ဘင်္ဂါလီကို နိုင်ငံသား သတ်မှတ် ဖို့ လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီးရန်တာဝန်မှာ ရခိုင်တိုင်း ရင်းသားတွေ သာမက ဘဲ မြန်မာလူထုတစ်ရပ်လုံးမှာ တာဝန်ရှိ ပါတယ်။ ကင်တားနားအစား အခြား သမာသမတ်ကျသူ တစ်ဦး (သို့မဟုတ်) မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့၏ အခွင့် အရေးနဲ့ ဥပဒေကို လေးစား လိုက်နာ သူတစ်ဦး ပြောင်းလဲ ခန့်ထားစေဖို့ ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုကြရန်နဲ့ ဘက်လိုက်တဲ့ ကင်တား နားကို ရောက်လေရာ အရပ်မှာ ဆန္ဒပြကြဖို့ လိုပြီဖြစ်ပါကြောင်း တိုက် တွန်းရေးသား လိုက်ရပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ ညွန့်မြန်မာ ညီညီအောင် အနုပညာ လုပ်ခွင့် ၃...
ရွှေတိဂုံဘုရားက ပျောက်သွားသည့် ရွှေခွက် အဘိုးအိုထံတွ...
iPhone5ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် တရုတ် အမျိုးသမီး တစ်ဦး ...
ကိုယ်လုံးချွတ်ရိုက်တာမဟုတ်ပေမယ့် ဝေဖန်မှုကြောင့် S...
ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုံရှိ M.W.D.C မှ ရခိုင် အမျိုးသမီး ...
နယ်ခြားစောင့် တပ်စွဲရာ ၀ဲကြီးစခန်းသို့ ကေအင်န်ယူ အ...
စွန့်စားလိုစိတ်ရှိသော အမျိုးသမီးများ လိင် စိတ်ပြင်...
ဒေါ်စုကို နိုင်ငံခြားဘယ်သူပို့ လိုက်တာလဲ? ဘာကြောင့်...
မယားကောင်းဆိုတာ အိပ်ယာထဲမှာ သစ်တုံးလို၊ ကျောက်ရုပ်...
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး၏ ပြစ်ဒဏ်များကို နေပြည်တော်အသ...
"ကျွန်မ အပျိုစစ်စစ်ပါမောင် ... ဆိုတဲ့ ခေတ် ... မှုန...
တာလီဘန်တို့က မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်သင်တန်းတစ်ခု ဖွင...
ညောင်ဦးတွင် ပြင်သစ်အမျိုးသမီးအား ရိုက်နှက်လုယက်သွ...